Fampisehoana vaovao an'ny Cintiq Pro 24 "an'i Wacom miaraka amina vahaolana 4K | Creativos Online
Wacom dia manana efijery vaovao, ny fampisehoana penina Cintiq Pro 24-inch
Fotoana vitsy lasa izay dia fantatsika ny tolo-kevitr'i Wacom fanta-daza, ny Wacom Cintiq Pro Engine anao miaraka amin'ilay manolotra antsika avadiho ny tranontsika ho studio mamorona Azontsika atao ny manararaotra ny programa sy ny rindranasa hahitana ny fomba tsara indrindra hanolorana ireo asa tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay.
Wacom dia nanolotra ny laharan'ny Cintiq Pro miaraka amin'ny efijery antonony vaovao izay mampiasa zava-misy marobe sy virtoaly, ary andiana fampiharana mamorona sy mamorona. Fanaraha-maso fotsiny ilay izy Wacom Cintiq Pro 24 manolotra lamba nomerika lehibe kokoa ary miaraka amin'ny mety ilaina rehetra mba hahavariana amin'ny endriny.
The Cintiq Pro 24 ″ manatevin-daharana ireo roa teo aloha izay navotsotra, ny 13 ″ sy ny 16 ″, mba hananana tolotra isan-karazany tsara ho an'ny karazana filàna manokana ho an'ny endrika manokana.
Anisan'ireo soatoavina manaitra indrindra hitanay ao amin'ny Cintiq Pro 24 ″ hitantsika ny efijery 4K -ny, 98% ny fahamarinan'ny loko Adobe RGB ary loko iray lavitrisa ho an'ny traikefa fizahana tena izy. Ary koa ny traikefa nomen'ny teknolojia Pro Pen 2 miaraka amin'ny tsindry 8192 haavo, ny tampon'ny vera mangatsiaka ary saika latency aotra.
Ny tanjona dia ny hanomezana fanaraha-maso marina ny mpanakanto a fahatsapana voajanahary rehefa mampiasa pensilihazo eo amin'ny efijery, izay hanananao fitaovana sarobidy hiatrehana ireo zava-mitranga ankehitriny amin'ny famolavolana, toy ny augmented reality, virtual na 3D teknolojia.
Amin'ity volana martsa ity ihany io no hisy ny modely Cintiq Pro 24 vaovao amin'ny vidiny manomboka amin'ny 2.149,90 euro ka hatramin'ny 2.699,90 euro. Ny kinova Pen & Touch an'ny Cintiq Pro 24 dia ho tonga kelikely, amin'ny volana Mey amin'ity taona ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Wacom dia manana efijery vaovao, ny fampisehoana penina Cintiq Pro 24-inch
Ny fisafidianana tsara sehatra ho an'ny tranonkalanao dia mamorona ihany koa
Cintiq Pro Engine sy Cintiq Pro vaovao an'i Wacom dia aseho ho an'ny studio modular iray manontolo